files vCard waa il muhiim ah oo ka mid ah xiriirada in uu badbaadeen gal computer sida uu yahay qaab ka go'an in ay xiriir kombiyuutarka kaydinta. In ka badan muddada wakhtiga uu yahay mid aad u muhiim ah in la ogaado in farsamooyin kala duwan ayaa la soo saaray in sidoo kale boosaska badan ee dabiiciga ah si loo hubiyo in files vCard waxaa loo wareejiyaa teknoolajiyada telefoonka mobile kala duwan oo ay ku jiraan macruufka, Android iyo xitaa qalabka S60 Nokia. Tutorial Tani waa dhan oo ku saabsan in ay iPad ama iPhone wareejinta vCard ama la xiriir files si loo hubiyo in ay faa'iideysan hab user ay u baahan tahay oo aan wax arrin ama dhibaato.
Part1: Sida loo email files vCard si iPhone
Part2: Sida loo furo file vCard on iPhone ama iPad
Part3: Dooro xiriirada qaarkood ka faylka VCF iyo dhoofiyo iPhone
Part4: Sida loo wareejiyo la TunesGo Retro
Part5: Ogow & Si Download TunesGo Retro
Email xiriirada si iPhone badan tahay ayaa ugu fiican, waxaana habka ugu fudud in la hubiyo in xaalada ayaa ah mid waligeed ka horimaanin by user oo kale ah ku rakibidda barnaamij software dibadda iyo degsado danabka la xidhiidha in labada dhinac saddexaad. Waxay ka dhigaysa hubiyo in files yihiin ma ahan oo keliya wareejiyo iPhone laakiin amarka iyo waxyaabaha ay sidoo kale isku mid.
Ka dib waa habka ay tahay in la raaco arrintan la xiriira:
i. User wuxuu u baahan yahay in la hubiyo in iCloud waxaa taabtay saldhig oo iPhone gudahood:
ii. Tab ka dhanka xiriirada waa in loo leexanayo si ay u helaan shaashadda soo socda:
. iii www.icloud.com waa in la soo booqdo oo faahfaahin lagama maarmaan ay tahay in la siiyo login software:
iv. User ayaa markaas u baahan yahay in guji xiriir:
. v icon ayaa cog waa ka dibna in la daah furo si loo hubiyo in menu kacdo iyo in la hubiyo in xiriir ka dhoofiyaa computer ee foomka of vCard:
Qaybta 2. Sida loo furo file vCard on iPhone ama iPad
vi. Marka file vCard la badbaadiyey gal nidaamka user markaas u baahan yahay in la hubiyo in Gmail ama adeeg kasta oo kale oo email waxaa loo isticmaalaa in email files vCard ee cinwaanka email la doonayo in ay tahay in la furay qalab bartilmaameed. Email ayaa ka muuqan doona sida soo socota:
vii. Marka file vCard waxaa taabtay menu soo socda ka muuqan doona iyo tan ayaa sidoo kale ku eg yahay geeddi-socodka sida user a furi kartaa file vCard on iPhone ama iPad ah:
Qaybta 3. xiriirada qaarkood dooro file ka VCF iyo dhoofiyo iPhone
In si kale loo dhigo waxa ay sidoo kale la odhan karaa waa sida sixiddiisa file VCF ay u dhigma baahida user. Si loo hubiyo in wixii kaloo la sameeyo hab wanaagsan ee suurtogalka ah, waxaa lagula talinayaa inay raacaan habka uu soo hoos ku xusan si aad u hesho natiijooyinka waafaqsan shuruudaha aad ka dhigo:
i. User wuxuu marka hore u baahan yahay inuu soo bixi vCard in utility XLS ka websites kasta waxaa jira tobanaan kun oo ka mid ah:
ii. Marka la sameeyo file waa in la furay:
iii. User waa in ay raacaan si ay u dardar faylka furo si sax ah:
iv. File waa in dib loo eego oo bilaa saxar ah si ay kaliya xiriir ah iPhone kuwa ka mid yihiin in user u baahan yahay:
v. user ayaa markaas u baahan yahay in la hubiyo in menu file Jidka> dhoofinta waxaa la socda. User ayaa sidoo kale loo baahan yahay si loo hubiyo in faylka la baxshay iyo nooca file la bedelo si "CSV (comma xuduuddiisa leh)".
vi. Isticmaalka habka email oo uu soo sharaxay kor ku user markaas faylka saxar bedeli karaa iPhone iyadoo la kaashanayo email ah. Cinwaanka markaas loo furi karo oo u arkaan sida nidaamka ah in lagu Xusi, bilowgii tutorial this.
Qaybta 4.How si ay u gudbiyaan oo la TunesGo Retro
Waxaa shaki la'aan waa mid ka mid ah barnaamijyada software ugu fiican in la soo saaray by Wondershare si loo hubiyo in xiriir ah waxaa laga keeno ka iPhone in PC iyo Mac iyo waxaa sidoo kale laga keeno si iPhone ka PC iyo Mac. Waxaa jira faa'iidooyin dhowr ah oo la isticmaalayo this piece casriga ah cabsi badan iyo qaar ka mid ah faa'iidooyinka ay yihiin sida soo socota:
Waxaa wareejin karaa ilaa 90,000+ xiriirada in go hal.
Waxaa ka heli iyo tirtirtaa laftiisa xiriirada nuqul.
Waxay ka dhigaysa hubiyo in kala iibsiga waxaa loo sameeyaa qaab ah guuto oo ma aha oo kaliya uu tashiilo waqtiga laakiin sidoo kale dadaalka isticmaalaha.
Software ayaa lagu dhisay iyadoo ay xulashada ah oo maxkamad lacag la'aan ah si ay dadka isticmaala ku dooran kartaa in aad u tagto version la siiyo marka ay si buuxda u qanacsan arrintan la xiriira yihiin.
Intaa waxaa dheer ee xiriirada cusub via PC ma aha arin oo dhan.
Gui ama ka interface user garaafyada hubiyaa in diinta waa ciyaar saaxiibtinimo oo fudud ah.
Si aad u hesho sida ugu fiican ee ka mid ah isticmaalka software waxa lagula talinayaa in ay hubiyaan in geedi socodka soo socda waa mid hawlyari ku user ee PC gaar ah ama Mac si natiijada waafaqsan yihiin baahida iyo dalabaadka:
i. User wuxuu u baahan yahay in la hubiyo in barnaamijka la soo bixi URL http://www.wondershare.com/ios-manager/ taas oo Wondershare website-ka rasmiga ah. Interface waa sida soo socota:
ii. IPhone waxaa markaas in lagugu xiro PC ka dhex cable USB ah:
iii. Software ayaa si toos ah lagu ogaan doonaa qalab iyo muujin doonaa fayl iyo sidoo kale files in la joogo on xasuusta sida ay u iskaan waa:
iv. Riix xiriirada on bar bidix ee barnaamijka software ka dibna cusub oo bar ugu sareeya:
v. The xiriirada in ay yihiin ku daray in sidan si toos ah badbaadi doonaa in iDevice si toos ah iyo halkan nidaamka halkan ka baxayo.
Qaybta 5. Ogow & Si Download TunesGo Retro
Geedi socodka uu soo halkan ku xusan waxaa loo isticmaali karaa on dhan iDevices sida ay dhan macruufka taageero iyo la soo saaray iyadoo la isticmaalayo ereybixin tan lamida. Si habka fudud waxaa marnaba lagula talinayaa inay u boodboodaan tallaabo kasta oo ka mid ah habka uu soo halkan ku xusan sida ay u hubiso in natiijada laga helo hab super degdeg ah iyo sida ay u tahay doonista iyo rabitaan ee user kii iyaga oo bandhig ka dhigi doonaa sameeyo . Waa mid aad u fudud in la raaco, laakiin weli si looga fogaado dhibaato ah waxaa sidoo kale lagu talinayaa in ay qaataan talo a pro si looga fogaado in dhib kasta oo hababka.
> Resource > iPhone > Sida loo soo dhoofsadaan / inay iPhone ama iPad wareejiyo files vCard aad Si fudud